कमाण्डरकी जीवन साथी – sanghiya.com
Published October 4, 2012 · Updated October 4, 2012
– लाहाङ चेम्जोङ
एक्दमै डराइरहेको थियो ऊ । सायद, म मर्दैछु, मलाई मार्दैछन् सोच्यो होला । अत्तालिएको स्पष्ट देखिन्थ्यो । उसको अनुहारमा पश्चातापको ग्लानी पनि देखिन्थ्यो । भित्ताको कुनामा अडेस लागेर यताउत्ति हेर्थ्यो । कोही आयो भने सशङ्कित हुन्थ्यो । झ्यालबाट बाहिर नियालेर सायद कल्पना गर्थ्यो- भाग्नसके हुन्थ्यो । किनकि, बाहिर हेरिरहन्थ्यो-ऊ । त्यतिनै बेला अर्को कोठाबाट एकजना युवा आएर भन्यो ‘लेऊ यो बिस्कुट र तातो पानी खाऊ ।’ कताकता सहानुभूति प्राप्त गरेको महसुस भयो उसलाई । खुब भोकाएको थियो-ऊ । सुरुप्-सुरुप् पानी र बिस्कुट खान थाल्यो । मर्छुहोलाको ठाउँमा बाँच्छु होलाजस्तो महसुस गर्नथाल्यो । मार्छन् होला होइन बचाउँछन् होला भन्ने आसा पलाउन थालेको थियो-उसमा । तातो पानीको अन्तिम घुट्को पिएर गिलास राख्यो सामुन्नेमा देखियो लगभग चालीस वर्षको मान्छे आर्मीलेजस्तो ड्रेस लगाएको लामो सिरुपाते खुकुरी कम्मरमा भिरेको मान्छे । ऊ थियो- माङ्तोक कमाण्डको प्रमुख कमाण्डर खाम्सा । कुर्सी तानेर उसको अगाडि बस्यो खाम्सा ।
“केहो तिम्रो नाम ?”
“जीवनु डराएर बोल्यो ऊ ।”
“तिमीलाई पिटे ?” पिटेन भन्न टाउको हल्लायो ।
“तेसोभए किन डराउँछौं ?” डराउँदिन भन्न अलिकति टाउको उठायो ।
धम्कीको भाषामा खाम्साले भन्यो- “तर अन्तचाहिँ पिटाई मात्र के के हुन्छ यदि झूटो बोल्यो भने ।”
ऊ सबैभन्दा डरायो । झूटो बोल्दिन भन्ने स्वीकारोक्ति जनायो ।
“कति जना थियौं ?”
“आठ जना ।”
“यी रुखका मुढा गोलियाहरु कसलाई बेच्छौं ?”
“बमबहादुर भन्ने तलबाट आउँछ केटाहरु लिएर । एउटा गोलियाको हजार दिएर लैजान्छ । उसले पनि इण्डियाबाट आउनेलाई बेचिदिन्छ रे ।”
“तिमीले मात्र कतिवटा रुख ढाल्यौं ?”
“अहिलेसम्म लगभग चारसय जति ।”
खाम्साले अड्कल गर्यो रतुवामाई जङ्गलबाट मात्र दशौ हजार सालका रुखहरु ढालिए ।
“पढ्न अहिले छोडीसकेँ ।”
“गोलिया बेचेर कमाएको पैसा के गर्छौं ?”
“रक्सि र मासु किनेर प्रायः जसो पाटी खान्छौं ।”
“अरुले खान्छन् ।”
“तिम्रो व्यक्तिगत मज्जाको लागि रातारात त्यहाँको जङ्गल सिध्यायौं होइन ?”
यी गोलियाहरु रातारात इण्डिया पुगेर इण्डिया दिनानुदिन धनी हुँदैछ । त्यहाँका जनताहरुले हाम्रा रुखहरु प्रयोग गरेर राम्रा राम्रा घरहरु बनाइरहेका छन् । हामीलाई यो कुरा मन पर्दैन । यी हाम्रो रुखहरुबाट हाम्रै देशका गरिबदुखीहरुको घरहरु बनाउनुपर्छ । भोलि हाम्रो आफ्नै राज्य भएपछि यी सालका चिरानहरु प्रयोग गरेर रेल गाडीको लिगहरु ब्नाउनुपर्छ । तर, तिमीहरु भने अहिले नै ती सबै सिध्याइदिने ?”
खाम्साको कुरा सुनेपछि उसलाई कहिल्यै नबुझेको कुरा बुझेजस्तो लाग्यो । रात छिपिसकेको थियो । खाम्साले एउटा ओड्नॆ सिरक ल्याउन लगाएर उसलाई दियो र भन्यो-
“ल सुत भोलि कुरा गर्ने । दायाँबायाँ गर्ने होइन नि ।”
उसले पनि सोच्यो यति राम्रो व्ववहार गर्नेहरुसँग डराएर भाग्दिन ।
बिहान सबेरै खाम्सा उठेर कमाण्डका युवाहरुलाई उठाएर दैनिक कसरत गर्न पठाएपछि डायरी पल्टाएर हेर्यो । आज बाटो खन्ने दिन रै’छ धरमपुरमा । उसले सम्झ्यो त्यहाँका स्थानीय नेता हर्के लिम्बूलाई । उसले भनेको धरमपुर राजमार्गसँग जोडिएको गाउँ तर विकासको दृष्टिले धेरै अविकसित छ । बिजुली-बत्ती राम्ररी पुगेको छैन । बाटो उहिले झोडमा खनेको फेरि मर्मत गरेको छैन । हर्क लिम्बूले यसरी भनेको थियो- “लिम्बूहरु बसेको ठाउँमा विकास नहुने पो हो कि ?” त्यसको जवाफमा खाम्साले हाँस्दे भनेको थियो- “त्यसो त होइन होला ।” आजको बाटो खन्ने योजनाको लागि पाँचसय युवाहरु लिएर जानुपर्ने अनुरोध गरे पनि दुई अढाईसय जति युवाहरु चाहिँ लगेर धरमपुर जान सकिएला भन्दै खाम्साले योजना बनाउँदै थियो । बाहिर कमाण्डमा युवाहरु जुत्ता बजार्दै कवाजबाट आइपुगे । एकछिनपछि ठूलो आवाजमा एकै स्वरमा युवाहरु कराए-…”लिम्बुवान माटोको निम्ति प्रतिवद्ध छौं……लिम्बुवान राज्य प्राप्तिको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा मर्नै पनि तयार छौं……। जय लिम्बुवान !”
आजभन्दा दुई वर्षअघि एल्भी. गठन गर्न र त्यसपछि प्रशिक्षण दिन भनेर खाम्सा धरमपुरमा दुईपटक पुगेको थियो । त्यसपछि, यहाँका स्थानीय नेताहरुसँग कमाण्डरको कार्यालयमा भेटघाट मात्रै हुनेगर्थ्यो खाम्साको । लिम्बुवानबाट पश्चिम थरुहटसम्म फैलिएको मुख्य हाइवेलाई छोएर उत्तर-दक्षिण परेर अवस्थित् छ धरमपुर । यहाँको बाटो हर्क लिम्बूले भनेजस्तै पूरै दूर्गम ठाउँको जस्तो रै’छ । बाटो बाटोजस्तो यस मानेमा रैन’छ बाटोको दुई किनारमा विरुवाहरु झाङ्गिएका बाटो धरै ठाउँमा घुमेको र थुप्रै ठाउँमा पाइपहरुको खाँचो, तर टार्न नसकिएको रहेछ । बस्ती बाक्लो छ मध्यम र गरिब परिवारहरु धेरै सङ्ख्यामा बसोबास गर्छन् । सम्पत्ति कमानउनेहरु शहरतिर जानेगर्ने गरेकाले झोडको अनुहारमा कुनै परिवर्तन आउन नसकेको रहेछ धरमपुरमा । जमिन अलिकति डाँडा परेको छ र जति नै पानी पर्दा वर्षा हुँदा पनि पानी नजम्ने हुनाले डाँडागाउँ पनि भन्दा रै’छन् । त्यो गाउँमा सार्वजनिक सम्पत्ति भनेकै एउटा पोखरी रहेछ । त्यो पनि मिचिएर र पुरिएर पोखरीको आकार सानो भइसेकेको रहेछ । त्यही पोखरीको पानीबाट करिब दुईसय घरले खेती गर्दारहेछन् । खाम्साले दुईसय जना युवाहरुको दस्ता लगेर धरमपुर पुग्दा त्यहाँका स्थानीय मान्छेहरु दुईसयको हाराहारीमा भेला भएका रहेछन्- हर्क लिम्बू र नेत्र कार्कीको नेतृत्वमा खाम्साको टोली पुगेपछि ती गाउँले मान्छेहरु अत्यधिक खुशी भए । ताली बजाएर स्वागत गरे । समाजसेवी नेत्र कार्की डिलमाथि उक्लिएर भाषणको शैलीमा बोल्नथाल्यो र बोल्नलाई खाम्सासँग अनुरोध गर्यो । र खाम्साले यसरी विचार राख्यो-…।” हामी भोलेण्टियस्र लिम्बुवानको नौ जिल्लामा यसैगरी परिचालित छौं । जनताका निम्ति विकासका कार्य गर्ने हामी कहिले पनि थाक्नेछैनौं । हामीले आज धरमपुरमा यहाँका जनताहरुसँग यहाँकै लागि बाटो खन्न पाउँदा खुशी लागेको छ । हरेक गाउँ हरेक बस्ती हरेक खोँचहरुका विकासको कार्य पुर्याउन सके समग्र लिम्बुवान सम्मॄद्धशाली बन्नेमा हामीलाई विश्वास छ । हामी अनवरत् कटिवद्ध छौं…! जय लिम्बुवान !”
सबैले ताली बजाए । बाटो खन्न मर्मत गर्न सुरुभयो । पुसको महिना भएकोले धुलो निक्कै उड्नथाल्यो र बाटो छेउका विरुवाहरु विरुवाका हाँगाहरु काट्न थाले । बाटो नाप्नेहरु नाप्दै थिए खन्नेहरु खन्दैथिए, कोही गीत गाउँदै खन्ने कोही गफ गर्दै खन्ने कोही गाउँले चेलीहरु तिर्खाएकाहरुलाई पानी पिलाउन व्यस्त थिए । खाम्सा हर्क लिम्बू र नेत्र कार्की पोखरी सर्वे गर्नगए । पोखरीको पानी बाह्रै महिना नसुक्ने बुझेपछि खाम्साले एउटा सपना बुन्यो पोखरीको सेरफेरोमा । “पोखरीलाई गरिराएर २-४ वटा डुङ्गा चलाउने- त्यो खासगरी सानो बच्चाहरुको लागि रमाइलो गर्ने स्रोत बन्नसक्छ । पोखरीको वरिपरि विरुवा रोपेर तारबार गर्ने बस्ने फलैँचाहरु निर्माण गर्ने सानो र थोरै खर्चमा पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन सकिन्छ ।” हर्क लिम्बू र नेत्र कार्कीलाई खाम्साको उत्तम लागेको बताए । उनीहरुले छलफल गरेर तुरुन्त कार्यक्रम बनाउने छलफल पनि गरे । त्यो दिन पाँच बजेतिर खाम्साले धरमपुरबाट आफ्नो टोली चारवटा बसमार्फत् फर्काए ।
खाम्साले आफूले नेतृत्व गरिरहेको माङ्तोक कमाण्डको कार्यालयमा आइपुग्दा बाहिरपट्टिको कुसर्ीमा गाउँले अन्नेली काका उसैको पर्खाइमा बसिरहेको रहेछ । साँझ भइसकेको थियो । खाम्साले नमस्कार गरी अन्नेली काकालाई भित्र आफ्नो कोठामा लिएर गयो । खबर आदान-प्रदान गरे । खाम्सा नौ महिनादेखि घर गएको थिएन । आफ्नो सत्तरी वर्षे बोजूले लिम्बुवान राज्य प्राप्त गर्न खाम्सालाई आशीर्वाद दिएको उसले झल्झली सम्झ्यो । गाउँको खबर सुन्दै जाँदा नौ महिनाअघि घर छोड्दा आफ्नी श्रीमति साइँलीले रुँदै भनेकी शब्दहरु एकाएक मानसपटलमा घुम्यो- “लिम्बुवान माटोको लागि रणमैदानमा मैले आफ्नो मुटु श्रीमानलाई श्वास थामेर पठाउँदैछु ।” अन्नेली काकाले साइँलीले पठाएकी भुटेको भटमास र अमिलो गुन्द्रुक एक पोका निकालेर हातमा थमाई दियो । र भन्यो- “खाम्सा ! बुहारीले नभन्नु भनेकी थिई भन्नेपर्छजस्तो लागेको छ ।”
खाम्सा झस्कियो- “काका भन्नुस् न । कुरा नलुकाई भन्नुस् ।”
साइँलीले ती महिनादेखि सप्तमीबाट लामा गाउँको सभापति बुढोको पसलमा चामल बोक्ने काम गर्दैथिई । एक बोराको असी रुपैयाँ लिन्थिन् । बिहान खाना खाई छोरा सेन्लपलाई स्कुल पठाएर सप्तमी जान्थी र बेलुकीपख फर्किन्थी । हप्तादिन भयो खुट्टा सर्किएछ निकै ठूलो सुन्निएको छ ।
खाम्सा निक्कै भावुक देखियो । सोध्यो काकासँग- “काका भाँचिएको त होइन ?”
“होइन होला भन्थी ।”
“साइँली समस्याहरु आफैले सामना गरौं भन्छे ।”
“आन्दोलन सफल पार्ने मेरो नेतृत्वमा कुनै समस्या नआओस्- ऊ चाहन्छे ।”
खाम्सा निरन्तर बोलिरह्यो- उनको यो प्रकृति बेठीक लाग्छ फेरि सही पनि लाग्छ ।
काका जब म लिम्बुवानको आन्दोलनमा होमिएँ तब पो थाहा भो हाम्रो लिम्बुवान त मरिसकेको रहेछ ।
क्षतविक्षत् थाङ्थिलो अवस्थामा पाएँ । अब लिम्बुवानको यो दुःखद् अवस्थालाई यही भुलेर कसरी फिर्ता होऊँ साइँलीको समस्या अनि मेरो घरको समस्या एउटा समस्या हो । यस्ता हजारौ समस्याहरु रै’छन्- लिम्बुवानमा । समग्र समस्याहरुको समाधान गर्न मजस्ता हजारौं युवाहरु खाई-नखाई सुती-नसुती लागिरहेका छन् ।
यति नै बेला एकजना भोलेण्टियस्र खाम्साको नजिक आइपुग्यो र अन्नेली काकालाई दुईहात जोडेर “जय लिम्बुवान” भन्यो । कमाण्डका युवाहरु कमाण्डभित्र पाहुनाका रुपमा आएका सबैसँग अपरिचित भएपनि यसैगरी सम्बोधन गर्नेगर्दथे । त्यो युवा खाम्सातिर फेर्केर बोल्यो- “चुम्मे आज खाना बानाउने पालो मेरो टोलीको हो ।”
“कमाण्डका कतिजना छौं ?”
“अठार जना ।”
“उन्नाइस जनाको बनाउनू । अनि यो गुन्द्रुक गाउँदेखि आएको रै’छ । यसलाई मजाले झोल बनाउने । बनाउन आउँदैन भने म बनाउँछु ।”
“हुन्छ” भनेर हिँड्यो ऊ ।
अन्नेली काकाले भित्ताको बिजुलीतिर नियाल्दै भन्यो- “खाम्सा यस्तो बत्ति हाम्रोतिर कहिले पुग्ला ?”
“काका लिम्बुवानको नब्बे प्रतिशत भाग हाम्रो गाउँजस्तै अँधेरो छ । बाटो-घाटो छैन । पुल-पुलेसा छैन । चिल्लो बाटो ठूलठूला घर र बिजुली बत्तीहरु त राजधानी र शहर बजारमा मात्रै केन्द्रित रै’छ । हाम्रो पैसाले अरु सुविधा सम्पन्न भएका छन् । हाम्रो गाउँतिर सलल बग्ने नदीबाट यस्तो बिजुली उत्पादन गरेर उनीहरु आनन्दमा बस्दारै’छन् । यो ठीक हो त काका ?
काकाले ठीक नभएको भन्न टाउको हल्लायो ।
“काका लिम्बुवानको नाै जिल्लाको चारसयवटा गाविसहरु मैले घुमेको छु । हाम्रो मान्छेहरु आफ्नो मातृभाषा बोल्न छोडे । एक महिनाअघि चारखलमा धान नाच्नुपर्ने भयो । हात समाएर आँगनमा घुमियो तर पालाम भन्न कसैले सकेनन् । चोयाका सामान चलाउन छाडे । रबर र प्लाष्टिकका सामानहरु गाउँगाउँमा पुगेका छन् । बाँसबाट बुनेका विभिन्न सामग्रीहरु गाउँ-शहरमा चलाउन सकेको भए तपाइँ-हामीले जानेको सीप र कला-कौसलको बिक्री हुनेथियो……॥”
काकाले खाम्साको कुरा निक्कै ध्यान दिएर सुनिरह्यो । केही छिनपछि काका र खाम्साले खाना खाइवरी सुत्न कोठामा पसे र खाम्साले चारैतिरको कमाण्डमा फोनमार्फत् जानकारी लियो । त्यसपछि उसले आफ्नो सम्बन्धित् नेतालाई फोनमार्फत् रिपोर्ट गर्यो ।
काकासँग कुरा पुनः सुरुभयो । प्रसङ्गवस खाम्साले पनि साँइलीलाई नसुनाउने सर्तमा सात महिनाअघि झापाको बुधबारेमा गोली लागेको घटना सुनायो । पेटको बायाँ छेउमा लागेको दाग देखाउँदै खाम्सा जोसियो- “काका लिम्बुवान विरोधीहरुका गोली खाँदै गोलीहरु छल्दै हामी हाम्रो उद्देश्य प्राप्ति गर्न प्रतिवद्ध छौं ।” अन्नेली काका गोलीको डाब हेरेर छक्कपर्यो । खोई के सम्झ्यो एकछिन निहुरेर काकाले मुख फोर्यो- “खाम्सा हाम्रो छोरा-भतिजहरु हाम्रो राज्य प्राप्तिको लागि बन्दुकको गोलीसँग लडिरहेका रै’छन् । ज्यानको बाजी थापेर खाई-नखाई युद्धमा रै’छन् । अब म पनि गाउँमा पुगेर यो आन्दोलको नेतृत्व म बुढोले गर्छु ।”
काकाको बुढो तर जोसिलो प्रतिवद्धताले खाम्सा हर्षविभोर भयो र जुरुक्क उठेर खुट्टा बजार्दै काकालाई सलाम् गर् यो । निकै रातसम्म यी दुई योद्धाहरु आन्दोलन र भोलिको रणनीतिको विषयमा कुरा गरे र सुत्ने सहमति गरे । करिव आधा घण्टामा खाम्साको मोबाइल फोनमा रिङ बज्यो । नयाँ नम्बरबाट फोन आएको थियो । उसले फोन उठाएर बोल्यो । …” खुब धम्क्यायो । नेता र आफ्नो सुरक्षा गर्न नसक्ने चेतावनी दियो । …हुन त यस्ताखाले धम्कीहरु त खाम्सालगायत लिम्बुवान आन्दोलनमा समाहित भएका नेताहरुले बारम्बार सामना गर्दै आइरहेका थिए । यो धम्कीले खाम्सा आधाघण्टा बढी घोत्लियो । कमाण्डरको हैसियतले उसलाई ठूलो र गम्भीर जिम्मेवारीको महसुस भयो । आन्दोलनलाई थप सशक्त र सफल बनाउन सुरक्षाको बारेमा थुप्रै योजनाहरुको ब्रेनस्ट्रमिङ् गर्दै खाम्सा निदायो ।
भोलि बिहान सबेरै अन्नेली काका गाउँ फर्कनेवाला थियो । खाम्साले नौ महिनासम्म छुट्टिएर बस्नुपर्दाको अनुभूतिहरु आफ्नी श्रीमति साइँली बोजु र छोरा सेन्लपलाई दुई शब्दमा एउटा चिठी तयार गरेर पठायो । अन्नेली काकाले पनि बढो उत्साहित मोडमा भन्यो- म यो चिठी पुग्ने बित्तिकै सम्मानका साथ कमाण्डरकी श्रीमति अर्थात् जीवनसाथीलाई दिन्छु । अन्नेली काका थुप्रै कुराहरु खेलाउँदै गाउँतिर लाग्यो । यता कमाण्डर खाम्सा थप प्रतिवद्धताका साथ योजनावद्ध आन्दोलनमा लागिरह्यो ।
Source: संघीय मासिक वर्ष १, अङ्क ४/५, पूर्णाङ्क ५ साउन-भदौं २०६७ (सन् २०१०) किरात येले तङ्गप ५०७०
Next story एमाले अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र प्रदान
Previous story कथा साहित्यः ‘सोघा’